Muqdisho oo looga dhawaaqayo guddi qaabilsan isku celinta hantida dadweynaha – idalenews.com
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday inay magacaabeyso sida ugu dhaqsiyaha badan guddi madax bannaan isla markaana awood leh kaasi oo qaabilsan isku celinta iyo qiimeynta hantida dadweynaha ee la kala heysto.
Wasiirka arrimaha gudaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Md. C/Kariin Xuseen Guuleed ayaa sheegay in Wasaaradiisu dhowaan magacaabeyso guddi madax bannaan oo heysta awood ballaaran isla markaana qiimeyn ku sameeya hantida la kala heysto.
“Sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan u magacaabayaa guddi awood leh oo qaabilsan hantida dadweynaha si ay u noqoto kalsoonidii ka jirtay magaalada Muqdisho iyo is jaceylkii dadka ee horay u jiray” ayuu yiri Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya oo sheegay in ujeedada loo magacaabayo guddigani ay tahay soo celinta sharafta iyo karaamadii ay lahayd Soomaalida oo 22-sano uu soo gaaray burbur lixaad leh.
Dhinaca kale Wasiirka arrimaha gudaha ayaa sheegay in guddigani awoodiisu ay gaarsiisan tahay ilaa heer Madaxweyne iyo Ra’iisal Wasaare iyo waliba Golaha Wasiirada, wuxuuna caddeeyay in howshiisa ugu horeysa uu ka bilaabayo magaalada Muqdisho.
Waxa uu sheegay Wasiir C/Kariim Xuseen Guuleed in dowladu marka ay ku dhawaaqdo guddigan cusub ay u howlgelayaan arrimaha hantida la kala heysto, wuxuuna xusay in dowladdu go’aansatay inaanay marnaba raalli ka noqoneynin magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka in shacabku ay kala heystaan hanti gaar ahaaneed iyo midda guud sida xarumaha Dowladda.